မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်) ရိုက်ကူးတဲ့ ကားပေါ်မှာ လိုက်လာတယ် ဆိုတဲ့ သရဲကား ဆင်ဆာထိပါတယ်။ဘာသာရေး ထင်ယောင်ထင်မှားမှု ဖြစ်စေတယ်၊ဘယာနကရသမြောက်တယ်ဒါကြောင့် အများပြည်သူ မကြည့်သင့်ဘူးလို့ ဆင်ဆာအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။အများပြည်သူ မကြည့်သင့်တဲ့ကားဟာ အများပြည်သူသွားတဲ့ ပလက်ဖောင်းမှာ အရောင်းသွက်နေပါတယ် တဲ့။ဇာတ်လမ်းက ဘယ်လိုလဲ ???ခွန်းဆင့်နေခြည်နဲ့ ယွန်း ကားတိုက်ခံရပြီး မိုင်တိုင် ၇၆ မှာ အမြှုပ်ခံရတယ်၊ သရဲဖြစ်သွားကြတယ်၊ အဲဒီနေရာမှာ ပျက်တဲ့ ကားတစီးပေါ်ကို သရဲတက်လာတယ်၊ ကားပေါ်မှာ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်တဲ့ မင်းအုပ်စိုး၊ လင်းဇာနည်ဇော်တို့ ပါတယ်၊ ခရီးသည်တွေကို သရဲဝင်ပူးတယ် စသဖြင့် ရိုက်ထားတယ်လို့ ကြည့်ဖူးသူတယောက်က ပြောပြပါတယ်။ဒီတပတ်ထုတ် အလင်းတန်းဂျာနယ်မှာလည်း ဒီအကြောင်း သတင်း တပုဒ် ရေးထားပါတယ်၊ ဖတ်ပါအုံး။
သရဲကားကိုတော့ ဆင်ဆာထိတာ ကျွန်တော် ထောက်ခံပါတယ်။ တကယ်ပဲ ဘာသာရေးဆိုင်ရာသာသနာနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေလို့ပါ။ ဥပမာ..ထိုင်းကပြည်သူတွေဟာ သရဲကားတွေထင်တိုင်းကြဲ ရိုက်တဲ့သူကရိုက် ကြည့်တဲ့သူတွေက ကြည့်ကြအခုဆို ထိုင်းဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်လောက်ကသေရင် အားလုံးသရဲဖြစ်တာပဲလို့ ယုံကြည်နေကြတာသတိထားမိတယ်..မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိုင်းလိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုယ်တွေ့ပါ။
အပေါ်ကဆ၇ာများ ခင်ဗျား။ အဲဒါဆို ဆင်ဆာကို ထောက်ခံတယ်ပေါ့။ လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်ခွင့် စတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်တွေကို မယုံကြည်ဘူးပေါ့။Mg Wai
အမေရိကားမှာသရဲကားတွေပေါမှပေါ၊ ဒါပေမဲ့ယုံတဲ့လူလဲရှိ။ မယုံတဲ့လူလဲရှိပါ... အဓိကကတော့လူတွေပညာတတ်နေဖို့ အဓိကပါ.. ပညာတတ်တော့၊ အမှားနဲ့ အမှန်၊ အကောင်းနဲ့ အဆိုး၊ အကြောင်း နဲ့အကျိုး၊ ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဆင်ခြင်မှု့ အလိုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ၊ ဟောင်းနွမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့၊ နေရာတကာဆင်ဆာလုပ်ချင်တဲ့ဟာကြီးမလိုတော့ပါဘူး၊ ဒီနေ့ ဗုဒ္ဒဘာသာဒီလောက်ထွန်းကားပါတဲ့ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာ.. ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ ဆန့် ကျင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဟာ.. ဆရာတော်ဦးသုင်္မဂလအဟောအရဆို.. ဘီယာဆိုင်ဖွင့်ဖို့ လိုင်ဆင်လျှောက်တာကမှ ဗုဒ္ဒတရားတော်ဟောဖို့ခွင့်တောင်းရတာထက်လွယ်သေးဆိုဘဲ... ကြည့်လုပ်ကြပါအုံးအရပ်ကတို့ ရဲ့.. Entertainment ဆိုတာကိုနားလည်ကြဖို့ ပါ..ပြောရအုံးမယ်..ထိုင်းမှာမှ လူငယ်တွေဘုန်းကြီးဝတ်ရင်အနဲဆုံးတစ်လဗျ..၀န်ထမ်းရပိုင်ခွင့်မှာကို အတိအလင်းရှိတယ်.. ပြီးတော့ အသက်၁၈နှစ်အောက်အရက်မရောင်းရနေရာတကာမှာရှိသဗျ.. နေ့ လည်ပိုင်းအရက်မရောင်းရ..ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်းမှရောင်းသဗျ..ကဲမြန်မာပြည်မှာဘာများလုပ်ပေးနေသတုံး၊ ဒီလို လူငယ်တွေလဲအကျိုးရှိ၊ ဘာသာရေးကိုလဲတဖက်ကအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့စည်းမျည်းမျိုးတွေ.. မြန်မာပြည်ကတော့..၀ါးလုံးခေါင်းထဲလသာတဲ့အတတ်မှာတော့တစ်ထက်ကမ်းခတ်ပါဘဲ.. နားထောင်ချင်ရင်ဟောဒီမှာသွားနားထောင်..မြန်မာပြည်ဘယ်လောက်ဘာသာ၊ သာသနာပျင်စီးနေသလဲသိရမယ်.. အဲနားထောင်နိုင်တဲ့ကိုယ်ခံအားတော့ရှိမှနော်..တော်ကြာကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မကိုက်လို့ ဘုန်းကြီးကိုရန်လုပ်မိနေအုံးမယ်...http://buddhism.goldenlandpages.com/buddhismmp3/uthumingala.html
Notic >>> notice that what u r talking about??? we r not talking about 'unpredictable disaster'!!!i believe that u r notareal buddhism (Theravada)after looking upon ur commment bcoz u dont know how to prepair not to beaghost. how pity u r!
Burma, Buddhism, Neutralism http://www.youtube.com/watch?v=myi_Vg5vu9I
Brainlessယုံကြည်မှု မှားယွင်းသွားနိုင်ပါသည်တဲ့လား အစထဲက မှား နေတဲ့ ယုံကြည်မှု ဆိုတာကော သိသလား????မသိသေးရင် ဒီမှာ သွားကြည့် www.messengerforbuddhist.blogspot.comအော် ကျွတ်ကျွတ် ကျွတ်Hey brainless guys, are u fighting the Buddhists according to that brainless website? It is so funny. They are fighting our religion unreasonably.Your master(the writer of that blog) have jealous upon our religion.If u do not satisfy with my respond, u and your master can visit to [email protected] Oh suchapoor and jealous guys.
ဟိဟိ ငြင်းနေကြတယ် ပျင်းစရာကြီး သရဲ ဆိုတာ ဘယ်ပုံ ရှိလဲ သိကြပါလား ဘယ်သူမှ တိကျ သေချာ တာမပြောနိုင်ပါဘူး။ပန်းချီ ဆရာတွေ ဆွဲလိုက်ကြတာ လဲ စုံလို ။မငြင်းကြပါနဲ့ ။မသေချာဘူး၊ ဆင်ဆာထိလည်း၊ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ရောင်းရသလောက်ရောင်းနေကြတာဘဲ၊ဆင်ဆာလွတ်ရင်လည်း၊ဘာမှမထူးဘူး လမ်းဘေးက ခိုးကူး ခွေ ဖြစ်ရတာဘဲ
http://www.freemyanmarvcd.org/PlayMovie/12231/1/oPn7t0mjYVPSssb3JHgGA_aRrRQHZqဒီမှာ ကြည့်ကြည့်ဗျာ... သရဲကား လင့်ခ်ပဲ...